Archive du 20190207
Jeneraly Noël Rakotonandrasana Maty an-drano tany Maevatanàna
Nodimandry tampoka omaly maraina tany Bemangoraka Mahazoma distrikan’i Maevatanana ny Jeneraly Rakotonandrasana Noël. Tanindrazany any an-toerana, ka avy nijery ny ombiny izy no handeha hiampita rano, raha ny fampitam-baovao vonjimaika.
Loza sy ny Fitondrana Rajoelina Miteraka adihevitra tsy mety vita
Nanjelanjelatra sy namirapiratra ny fampielezan-kevitr’i Andry Rajoelina na nialoha na ara-potoana. Toy izany koa tany amin’ny fifidianana, ny valiny, fanisam-bato hatramin’ny fianianana tetsy Mahamasina.
Volley CCZ7 2019 andro faha-5 Lavon’ny Goaves Maorisy ny CNaPS Sport Madagasikara
Nahazoam-bokatra tahaka izao manaraka izao indray ny andro faha-5, alarobia 06 febroary, eo amin’ny lalao volley ball CCZ7 « Fiadiana ny ho tompondakan’ny Faritra faha-7 aty Afrika » taona 2019 izay tontosaina etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina Antananarivo.
Edito Asa angamba atsy ho atsy !
Tsy manana depiote intsony isika izao. Takalon’izay kosa dia lasan’ny filoham-pirenena ambongadiny ny fahefan’izy ireo. Ara-bakiteny amin’izao fotoana ny mandidy sy manapaka.
Asa tsizarizary, sakafo ambany foitra Sahirana ny 92% n’ ny Malagasy
Miaina anaty fahantrana ny 92 %-n’ny mponina manerana ny Nosy. Ankoatra ireo tena milomano anaty harena na ireo antsoina hoe :
Mampiahotra ireo mponina hiala eny amin’ny faritry ny loza, Ambanin’Ampamarinana ny fananan’izy ireo, indrindra ny tany. «Atahoranay fa rehefa miala izahay ho lasan’ny olona ny taninay, indrindra ao anatin’iny faritra mena iny izay efa nalefa any amin’ny fokontany ny karne.
Faritra mamokatra eto Madagasikara Ratsy lalana avokoa
Maika ny fanamboarana ny lalana tsy misy mpijery hatramin’izay ka lasa tany lavitra andriana sy mitoka-monina tsy hitan’ny mpitondra fanjakana.